YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, March 12
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/12/20140အကြံပြုခြင်း
မလေးရှားလေယဉ်ပျောက်သွားလို့ရိုးရာအရ အစီမံများပြုလုပ်နေပုံ
မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ရေပုလင်းနဲ့ ပေါက်
မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လေယာဉ် MH370 နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အမှန်တရားတွေကို ဖုံးကွယ်ထား တယ်လို့ အားလုံးက ယုံကြည်နေကြပါပြီ။
မြန်မာ အိမ် ဖော် များ နှစ်စဉ် စတေးရှောင်ရ မည် ဆိုသည် ကို ဟောင်ကောင် ရောက် မှ သိ
မြန်မာ အစိုးရ ဌာန များ မှ ဦးစီးပြီး ဟောင်ကောင် သို့စေလွှတ် ခဲ့သည့် အိမ် ဖော် များ သည် နှစ်စဉ် တရုတ် နိုင်ငံ ၊ မကာ အို စသည့် ဒေသ များ သို့အထွက် ပြ ပြီး ဗီဇာ သက်တမ်း တိုးရ မည် ဆို သည် ကို ဟောင်ကောင်ရောက် မှ သိရှိရသည် ဟု ဟောင်ကောင် ရောက် မြန်မာ အိမ် ဖော် တစ် ဦး က အပိုလို သတင်း အုပ်စု သို့ပြောသည်။
စတေးရှောင် ရာ တွင် ကုန်ကျ စရိတ် များ ကို အလုပ်ရှင် က တစ်ဝက်သာ ကျ ခံ မည် ဖြစ် ပြီး ကျန် တစ်ဝက် ကို အိမ်အကူ တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ က ကျ ခံ ရ မည် ဟု ဆိုသည်။
" တစ်ဝက် စိုက် ရမယ် ဆိုရင် တော့ နှစ် လ နီးပါးစာ လခ ပါသွားမှာ ပဲ ဒါဆို ရင် စုမိ ဖို့မလွယ် ဖူး လို့အိမ် အကူ တစ်ဦး " ပြောသည်။
ဟောင်ကောင် ရောက် မြန်မာ အိမ် ဖော် များ အနက် အချို့မှာ လုပ်ငန်းခွင် စ၀င် နေ ပြီး အချို့မှာ အိမ် ဖော် သီးသန့်သာ မဟုပ် ပဲ အလုပ် ရှင် ၏ စက်ရုံ ၊ ဆိုင် စသည့် လုပ် ငန်းများ တွင် ပါ တွဲ ဖက် တာ ၀န် ထမ်းဆောင်ရသည်။
ဟောင်ကောင် ရှိ မြန်မာ အိမ် ဖော် ၂၀၀ အနက် အချို့မှာ တရုတ် ပြည် သို့စတေးရှောင် သွား ရန် အတွက် ကြောက် ရွံ့ လျှက် ရှိသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်ဖေါ့ကန်ရပ်ကွက်တွင်ယနေ့12.3.2014 ရက်
ညနေမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွါးခဲ့ရာအိမ်ခြေ ၁၆ လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုနေဆဲကျောင်းသားငါးဦး Bio သုံးဦးနှင့် Eco နှစ်ဦး
Ph 0931297940 ကိုသန့်ဇင်ဦး
ph 0931306551 ကိုဇင်မင်းဦး —
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဆေးလိပ်မီးမှစတင်ကာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်
၁၂.၃.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၇၁၅အချိန် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ ဗောဓိညောင်ပင်လမ်း၊ အမှတ်(၇၈)ရှိအိမ်ရှင်ဦးစိန်ဝင်းမြင့်၏ နေအိမ်မှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေအိမ် (၁၆)လုံးကို မီးကူး စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့် မီးသတ်ယာဉ်များရောက်ရှိငြှိမ်းသတ်ခဲ့၍ ၁၈၀၀ အချိန်တွင်မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။
မီးလောင်မှုအားစစ်ဆေးရာ ဦးစိန်ဝင်းမြင့်၏သားဖြစ်သူ ဖိုးသကြား (ခ)နိုင်ဝင်းထွန်း(၂၆)နှစ်မှ နေအိမ်အပေါ်ထပ်တွင် သောက်လက်စ ဆေးလိပ်ကိုမီးမငြှိမ်းဘဲ ခြင်ဆေးခွေထွန်းသည့် ကော်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သော အခံခွက်အတွင်းထားခဲ့ရာမှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် မီးလောင်မှုကြောင့် စုစုပေါင်းတန်ဘိုးငွေကျပ် (၈၈)သိန်းခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယင်းသို့ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူ ဖိုးသကြား(ခ)နိုင်ဝင်ထွန်းအား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း(ပ)၂၃၈/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့် မီးဘေးသင့်သည့် နေအိမ်(၁၆)လုံးမှ မိသားစုဝင်များအား ၀ါဦးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ယာယီဖွင့်လှစ်ကာ နေရာချထားပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရွှေသံလွင်အပါအဝင် အင်အားကြီး စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများ က နိုင်ငံအတွင်း သို့ မှောင်ခို လမ်းကြောင်းမှ စက်သုံးဆီများခိုးသွင်းနေကြောင်း သက်သေ အထောက်အထား များနှင့်တကွ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝင်းမြင့်က လွှတ်တော်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် စက်သုံးဆီမှောင်ခိုမှုဖြင့် သံသယရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကို အစိုးရက တရားရုံးရှေ့ ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့တင်သွင်းလာသည့် ဆီတင်သင်္ဘောများ ကိုပင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တားဆီးစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
စက်သုံးဆီ ဂါလန်ထောင်သောင်းချီ မှောင်ခိုတင်သွင်းလာသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများကို မတို့မထိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၆ လခန့်အကြာ ၂၀၁၄ မတ်လဆန်း တွင် ရေနံစိမ်းဂါလန် ၈၀၀ ခန့် သယ်ဆောင်လာသူများကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းလှမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အမှုဖွင့် အရေးယူ ခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်က ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာပါရှိခြင်းမရှိဘဲ သယ်ဆောင် လာသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်သည်။
တရားမဝင် စက်သုံးဆီမှောင်ခိုပြုလုပ်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရပြီး သာမန်လူများ အချုပ်ထောင်များအတွင်း ရောက်ရှိနေချိန်တွင် အလားတူ စွပ်စွဲမှုများနှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကမူ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သီးသန့်လေယာဉ် ဖြင့် နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်များသို့ လိုက်ပါခွင့်ရလျက်ရှိသည်။
ဥပဒေတစ်ရပ်မှာ မျက်နှာဘယ်နှဖက်ရှိသလဲ - ဆောင်းပါးမှ
ရေးသားသူ - ထွန်းခိုင်
ပြည်သူများကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အကြောင်း ပြောနေသည့် သမ္မတနှင့် သူ၏ အစိုးရ အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကော အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူကျပါရဲ့လား။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် များအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အချို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါစို့။
အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ၏ ညီလာခံကျင်းပရန် အတွက် နေပြည်တော်တွင် ပါတီ၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များသည် ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ အတွင်း စုဝေးရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ တိုင်းပြည်၏ ထိပ်တန်းအာဏာပိုင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် အဆိုပါပွဲ တွင် နိုင်ငံတော်အလံ ပြောင်းပြန် လွှင့်ထူမှုဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီး ၁၈၉ ရက်အကြာ ၂၀၁၃ မေလ ၂၂ ရက်တွင် နောက်ထပ် အလံပြောင်းပြန် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်နှင့် ဆွစ်ဇာလန် အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တို့ နေပြည်တော် တွင်တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအလံ ပြောင်းပြန်အနေအထားဖြစ်နေသည့်ပုံကို နောက်တစ်နေ့ သတင်းစာများ၌ ရောင်စုံဓာတ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
အလံပြောင်းပြန် လွှင့်ထူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထိပ်သီးအရာရှိကြီး များနှင့် တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူမှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ အစိုးရက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
သို့သော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆူးကလပ်ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သာမန်ပြည်သူတစ်ဦးကို အလံပြောင်းပြန် လွှင့်ထူမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရက အရေးယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ကျရောက်သော ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အခမ်းအနား၌ အလံပြောင်းပြန် လွှင့်ထူ ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားခံခဲ့ရသည့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီး တစ်နှစ်ကျော် ကြာသည်အထိ တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
တနင်္သာရီ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေသခံပြည်သူ တစ်ဦးက ကျောက်ခင်း လမ်းအစား ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ‘‘ယခင် အစိုးရမှာလည်း ငါပါတယ်၊ ဒီအစိုးရမှာလည်း ငါပါတယ်။ ဘာမှထော်လော် ကန့်လန့်မလုပ်နဲ့ ပါးရိုက်ခံရမယ်၊ မကျေနပ် ရင် တောခို’’ ဟု လည်းကောင်း မကွေးခရီးစဉ် အတွင်းက ‘‘ဘာနိုင်ငံရေးသမားကိုမှ ဂရု မစိုက်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်ဆိုပြီး နယ်တကာ လှည့်ပြီး ပါးရိုက်ရဲတယ်ကွဆိုပြီး မိန့်ခွန်းပြော လာတာ၊ ကျွန်တော်ပြော တာ၊ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှလည်း မကြောက်ဘူး’’ စသည့် အသုံး အနှုန်းများကို ဖြေရှင်းပေးရန် NLD အမတ်တစ်ဦး ဦးအောင်စိုးက ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် လွှတ်တော်၌ အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
ပြည်သူလူထုအပေါ် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော စကားများ ပြောကြား ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးကို အစိုးရက အရေးယူခြင်းမပြသည့်အပြင် အကာအကွယ် ပင်ပေးခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် လယ်ယာမြေအရေးဆောင်ရွက်သူများ၊ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ ပြုလုပ်သူများ၏ ကြမ်းတမ်းသည့်စကားများကိုတော့ အမှုဖွင့် အရေးယူရန် အစိုးရက အမြဲလိုလိုအဆင်သင့် ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၀၁၂ အတွင်းက ဒေသခံများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လာဘ်စားမှုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိုးနွမ်းစေမှုဖြင့် အချိန်မ ဆိုင်းဘဲ ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သော်လည်း ဝန်ကြီးဦးအုန်းမြင့်၏ ပြောဆိုချက်များ အတွက်မူ အစိုးရက ပြတ်ပြတ်သားသားကိုင်တွယ်ရန် ပျက်ကွက်နေကြောင်း တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း ဦးနေမျိုးဇင်ကပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/12/2014 1 အကြံပြုခြင်း
ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတဲ့ အနှိပ်ခန်းမှာ မိန်းကလေးအယောက် ၇၀ ရှိတယ်ဗျ ၊
နိုက်ကလပ်ကတော့ တော်တော်များများ ရောက်တယ် ၊ နိုက်ကလပ်တစ်ခုမှာ အနဲဆုံး မရှိဘူးဆို ကောင်မလေး အယောက် ၅၀ တော့ရှိတယ် ၊
ကာရာအိုကေ တစ်ခုမှာ ဗျမ်းမျှ အယောက် ၄၀ ထား ၊
နောက် - စင်တင်မှာက ၄၀ ပေါ့ဗျာ
နောက် - ခေါင်းလျှော်ဆိုင်ကို ၁၀ ယောက်နှူံ့းထား - အဲ. . ပြီးတော့
. . . .ဘိ ။
နောက်ပိုင်းက တနိုင်တပိုင်တွေများတော့ ဗျမ်းမျှ ၅ ယောက်နှုံးထား
(ဆရာကြီးလေသံဖြစ်သွားလို့ အထင်တော့မကြီးလိုက်နဲ့အုံးနော် ဒါတော့ ကြားဖူးနားဝ ဗျ)
အဲ - နောက်တဆက်ထဲက
ပါဆယ် ဂျိုင့်ဆွဲ DHL များ
( ဒါလည်းမြင်ဖူးတာ ၊ နည်းပညာတွေကတိုးတက်လာတော့ အရွေးမမှားဖို့အရေး ဖုံးထဲကနေ ဓါတ်ပုံလေးပါပို့ပေးသေးတာဗျာ၊ ဝန်ဆောင်မှူ့တွေက အဲ့လို ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာ )
ဒါကတော့ တော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆိုတော့ ... ထားပါ . .ဗျမ်းမျှ ၅ ယောက်ပဲထားအုံး ၊
ရန်ကုန်တမြို့ထဲမှာပဲ အဲဒီမိန်းကလေးတွေ အားလုံးဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိမလဲ ပေါင်းကြည့်စမ်းပါဗျာ ၊
အယောက် ၄၀၀၀၀ ဆိုများမယ်ထင်လား !
ကာရာအိုကေ တခုထဲနဲ့တင် ၅၀၀၀ ရှိတယ်နော် ၊
ဟ င်းးးးး !!!
အဲဒါ အသက် ၁၆ နှစ် ကနေ ၃၀ အတွင်း မိန်းကလေးတွေဗျ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ဘာပြောမှာလဲ !
လူမှူ့ဝန်ကြီး ဘာပြောမလဲ !!
အစိုးရ ဘာလုပ်ပေးမလဲ !
နောင်တခေတ် လွှတ်တော်ထဲလား ?
ဒါက တိတိကျကျ ဝမ်းရေးအတွက်ရှာဖွေစားသောက်နေကြရှာတဲ့ ကလေးတွေ နော် ၊
ကုမ္ပဏီတောက်တိုမယ်ရနဲ့ အိမ်ဖေါ်မပါသေးဘူး ၊
ပြီးတော့ အဆိုးဆုံးက -
မခိုင်းသင့်မခိုင်းအပ်ရာ မတန်မရာကို လူ့ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စွာအလုပ်လုပ်ပေးနေကြရတဲ့ . . .
လမ်းဘေး အရက်ဘီယာဆိုင်တွေမှာ စီးကရက် အရက် လိုက်ကြော်ငြာပေးနေရသူလေးများ မပါသေးဘူး ၊
( အရှင်လတ်လတ် လူညွှန့်တုံးကာ ဘဝပျက်စေတာ )
ကဲ - အဲဒါ ရန်ကုန်တစ်မြို့ထဲဗျ
ပြီးရင် တတိုင်းပြည်လုံးကို တွက်. . .
နောက် ပြည်ပမှာ ထွက်လုပ်နေကြရတဲ့ သူလေးတွေကိုတွက် -
ဟာာာ!!!
ဒါ ဖါ နိုင် ငံ မှ ဟုတ် ရဲ့ လား ¿¿
ပြီးတော့ အဲဒါတွေ အားလုံးအတွက် အကျိုးဆက် . . . . .
နောက် . . .
နောက် . . . အာ့ ¡¡
အသက် ရှူ လို့ တောင် ရ ပါ အုံး မ လား ဗျာ